Any in Ma'anshan National Fampandrosoana Toe-karena sy ny teknolojia Zone sy ho iray amin'ireo amin'izao tontolo izao ny mpitarika orinasa eo amin'ny sehatry ny metallurgical fitaovana orinasa mpamokatra entana, Taier Heavy Industry Co., Ltd. Niorina tamin'ny 2001, miaraka amin'ny voasoratra anarana renivohitry ny 449,35 tapitrisa yuan. The Company majors ao amin'ny famolavolana, fampandrosoana, orinasa mpamokatra entana, sy ny asa fanompoana barotra ny orinasa manerana izao rehetra izao lavaka, fitaovana efa voavitrana, i Seara lelan-tsabatra, sliding vilia, mandrel, compactor, fiara-fifindran'ny lavaka, fiara piesy sy ny sisa. Ny lasa Ny lisitra orinasa orinasa tamin'ny 2010, miaraka amin'ny tahiry code: 002347.
Taier no namorona orinasa metallurgical rojo sarobidy amin'ny alalan'ny fanokafana sy ny fifampizaràna, ary nanao izao tontolo izao ho lasa-kilasy nandroso mpanamboatra fitaovana, ny ankapobeny Arakaraka orinasa mpanome tolotra metallurgical fiainana manontolo tsingerim-tsaina sy vy fototra vahaolana mpamatsy. Taier dia nandresy ny fitokisana sy ny fiaraha-miasa ny mpanjifa amin'ny fanavaozana kokoa hatrany-mahay, ary koa ny modely, fifadian-kanina ary ny fanompoana hentitra loatra modely.
Amin'izao fotoana izao, Taier efa lasa ny filoha lefitry ny orinasa ao Shina vy sy Steel Association Metallurgical Equipment Sampana, ny lefitry ny filohan'ny rafitra Shina General milina Industry Association, filohan'ny vondrona ny fifindran'ny efa voavitrana sampana, ny filoha lefitra rafitra Shina Heavy milina Industry Association mavesatra fototra faritra sampana, filohan'ny vondrona Shina vy sy Steel Industry Association. Efa nahazo ny voninahitry ny firenena-anivon'ny orinasa teknolojia foibe, ny post-doctorat pirenena workstation, ary ny fitaovana metallurgical remanufacturing akademisiana workstation. Efa nametraka-pirenena Enterprise Teknolojia Center,-pirenena Postdoctoral Workstation sy Metallurgical Fitaovana Remanufacturing akademisiana Workstation, ary efa nahazo malaza Shinoa famantarana, patanty Excellence Award ao Shina, fanjakana-sehatra fifanarahana sy mpankatò ny voninahitra orinasa,-pirenena teknolojia fanavaozana modely orinasa, sns .
Taier dia mankatò ny teknolojia fitarihana sy nanorina ny famokarana, fianarana sy ny fikarohana fomba mahaleo tena fanavaozana, miaraka amin'ny vola miditra isan-taona varotra ny 5% vola amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana; mba hahatakatra mpanjifa sarobidy, Taier dia nametraka ny 4S fanompoana barotra modely ka asio danja amin'ny alalan'ny dingana iray manontolo ny vokatra lifecycle fitantanana sy ny asa fanompoana; Miankina mankatò ny fitantanana, ary tonga saina tanteraka ny nomerika, hita maso sy vaovao fitantanana ny dingana rehetra mba hanome mpanjifa amin'ny kalitao ambony vokatra sy ny tolotra.
Amin'ny fitantanana ny lanjan'ny modely ny famoronana, fifaninanana sy ny fampandrosoana tahaka ny fototry ny fitantanana orinasa, Taier no nanatontosa Customer, famatsiana, orinasa, mpiasa sarobidy fizarana ny mahatsapa sanda fizarana sy fampandrosoana iombonana. Taier miezaka hitarika ekipa fanoloran-tena, fandraharahana, ny fiaraha-miasa ny fanahy sy nitarika orinasa sy ny fitantanana fanavaozana ny teknolojia sy ny soatoavina. Taier efa nandray anjara mavitrika tamin'ireo asa fifanampiana-bahoaka ny China Charity Federasiona, Shina Vokovoko Mena, sns amin'ny fahatsapana ara-tsosialy mafy asa fitoriana.
Mijery ny ho avy, ao amin'ny Fanahy ny "ny fitantanana ny orinasa amin'ny fametrahana mazava tsara sy ny fahazotoana, mba hahazoana tena tsara", dia hatrany Taier hanao fandrosoana sy fanavaozana mba hampivelatra ny tenany ho "Taier Iraisam-pirenena", "Century Taier".
Tamin'ny 2000, Maanshan Taier Heavy Industry dia naorina;
Tamin'ny 2002, ny voalohany ao an-tokantrano manerana izao rehetra izao mpiara lavaka ho an'ny fiara lehibe ny miray volo sodina tevika milina natolotra (Baotou Steel 180);
Tamin'ny taona 2003, ny voalohany satroboninahitra lehibe ao an-toerana efa voavitrana nify fitaovana ho an'ny mangatsiaka Rolling natolotra (No.2 Cold Rolling Mill ny Wuhan Iron & Steel (Group) Co., Ltd.).
Tamin'ny 2004, ny orinasa dia anarana Anhui Taier Heavy Industry Co., Ltd .;
Tamin'ny 2005, ny voalohany ao an-toerana mafana foana 1700 Rolling ny Jigang dia tsy miankina fampidirana, Taier dia manaiky ny vokatra ny voafaritra adidy mavesatra-mpiray rehetra izao sy ny zana-tsipìka voalambolambo efa voavitrana (Ansteel no mitarika, miaraka amin'ny fiaraha-miasa ny CFHI, Shanghai milina Fitaovana Co., Ltd. );
Tamin'ny 2007, ny orinasa stratejika nanao sonia ny fiaraha-miasa fanekena Shina Heavy Industries Voalohany (CFHI)
Tamin'ny 2008, ny orinasa stratejika nanao sonia ny fiaraha-miasa fanekena Shougang Group
Tamin'ny taona 2009, ny orinasa stratejika nanao sonia ny fiaraha-miasa fanekena Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd
Tamin'ny 2010, ny orinasa dia voatanisa ary ho lasa mpitarika ny orinasa
Tamin'ny 2010, ny orinasa dia nankatoavina ho toy ny fototra Hi-Tech orinasa ao Shina Torch Program.
Tamin'ny 2012, ny orinasa vaovao ny Taier tamin'ny fomba ofisialy nataony tao fampiasana;
Tamin'ny 2012, ny orinasa nahazo ny "National May 1 Sendikà Medaly"
Tamin'ny 2013, ny orinasa dia toy ny tsy misy anarana panjakana orinasa fizarana name: Taier Heavy Industry Co., LTD.
Tamin'ny 2016, dia naorina Taier Group
Tamin'ny 2018, ny fitsapana foibe dia nahazo "laboratoara-pirenena fahaizana" (CNAS laboratoara fankatoavana)
Tamin'ny 27 Martsa, 2019, dingana voalohany amin'ny tetikasa ny tena toetrany Anhui Taier Engineering Teknolojia Co., Ltd. vita ka nataony an-famokarana.